Vashanyi vana veRussia vakawanikwa vakafa muAlbania hotera sauna
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Albania Kuputsa Nhau » Vashanyi vana veRussia vakawanikwa vakafa muAlbania hotera sauna
Albania Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • mhosva • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Vashanyi vana veRussia vakawanikwa vakafa muAlbania hotera sauna.
Sekureva kwemimwe mitsara, vashanyi vakadzipwa sauna yehotera nekuda kwenzira isina kufanira yemhepo.
Vashanyi veRussia vakafa kumadokero kweAlbania hotera.
Vamiriri veRussia Embassy vari kuongorora kufa kwevashanyi vana veRussia.
Vashanyi veRussia vakawanikwa vakafa muhotera mumusha weKerret kumadokero kwedunhu reAlbania Kavaja.
Mumiriri wemamishinari eRussia muTirana, Albania akati vashanyi vana veRussia vakawanikwa vakafa muhotera sauna mumusha weKerret mudunhu reKavaja kumadokero kweAlbania.
Vashandi vevamiriri vevamiriri vemumiriri weRussia mu Arubhaniya vari kuongorora ruzivo rwekufa kwevashanyi veRussia.
"[Vari] kuongorora mamiriro acho ezvinhu," mutauriri wemumiriri akataura.
Sekureva kweAlbania Daily News kuburitswa, vashanyi vana veRussia vakawanikwa vakafa nguva dzeChishanu muhotera sauna mumusha weKerret mudunhu reKavaja mu Arubhaniyakumadokero.
Dzese dzakadzipwa, chitaurwa chakataurwa zvichitoreva kunobva mapurisa.
Kunyanya, mapurisa ari kuongorora kana iyo ventilating system mune sauna yakashanda nemazvo.
Vakafa, varume vaviri nevakadzi vaviri, vaive nemakore ari pakati pe31 kusvika 60.